अवर्गीकृत - नेटवर्क रेडियो
घर / असंगठित
प्रकाशित जुलाई 30, 2018
रोमीहरूले हाम्रोलागि के गरे?
आह! मोन्टी पाइथनबाट अमर रेखा!
धेरै नवीनताहरू मध्ये एउटा, जुन रोमीहरूले हाम्रो लागि गरेका थिए त्यो हाम्रो सडक प्रणालीलाई नयाँ परिभाषित गर्नु थियो।
रोड डिजाइनमा एक क्रान्ति
रोमीहरूले आफ्नो नयाँ टेक्नोलोजी बोक्नु भन्दा पहिले सडकहरू के के हुन्थ्यो भन्ने कुरालाई भलाइले जान्दछ, तर यस्तो देखिन्छ कि उनीहरू सायद सीधा नभएको हुन सक्छ!
रोमीहरूले भने कि A बाट B सम्मको सब भन्दा द्रुत मार्ग सीधा रेखामा थियो; त्यसकारण उनीहरूको सडकका बाँकी अंशहरू युरोपलाई काट्छन्, त्यहाँ पहाडहरू थिए वा थिएनन्, त्यसैले यस्तो देखिन्छ।
ऊ अन्ततः पल्टियो!
अब पृथ्वीमा के G7DDN अब भइरहेको छ? के उसले अन्ततः आफ्नो संगमरमर गुमाएको छ? हुनसक्छ सायद तपाईलाई लाग्छ कि मसँग पहिले नै (!) छ, तर अचम्म, मैले यहाँ नेटवर्क रेडियोसँग समानान्तर देख्दछु।
मलाई बयान गर्न देउ…
प्रतिस्पर्धा को मुद्दा
जब एमेच्योर रेडियो यसको पूरै आडम्बरमा थियो, यो "प्रतिस्पर्धा" जस्तो थियो, महत्वहीन र अप्रासंगिक पनि थियो।
विदेशी देशहरूमा फोन कल असाध्यै महँगो थियो; ह्याम रेडियो केवल वित्तीय दृष्टिकोणबाट मात्र प्राप्त गर्न लायकको थियो, तर तपाईंसँग विश्वव्यापी संकेतहरू पठाउँदा पनि थरार थियो ...
सीबी रेडियो, बेलायतमा कम्तिमा, पहिलो अवैध थियो, र त्यसपछि एक पटक कानुनी थियो, ११ मिटर एफएम र output वाट उत्पादनमा सीमित थियो - अर्को ढोका १० मीटर ह्याम ब्यान्डले एसएसबी वा सीडब्ल्यूको wat०० वाट प्रसारित गर्न सक्ने कुरामा चिन्तित हुन कुनै कुरा थिएन।
M 446 मेगाहर्ट्ज लाइसेन्स नि: शुल्क रेडियो m०० मेगावाटमा c० सीएमको लागि match०० वाटको शक्ति र रिपीटरहरू र उपग्रहहरूसँग मेल खाएन।
यो एक कारण होम्सले उदाहरणका लागि ११m र 11 446 मेगाहर्ट्जमा आफ्नो कलगइनहरू र प्रक्रियाहरू लिएनन्। यो त्यसो गर्न कुनै मतलब थिएन।
न्यून प्रतिरोधको पथ
मानिसहरूले स्वाभाविक रूपमा "न्यूनतम प्रतिरोधको मार्ग" लिए - एक सानो इलेक्ट्रोन जस्ता!
२०१ in मा समस्या यो हो कि शौकको लागि "प्रतिस्पर्धा" छ र यो ठूलो बन्दुक प्रतिस्पर्धा हो!
इन्टरनेट को लागी कसैलाई, कुनै पनि हालतमा, कल गर्न को लागी भिडियो कल को लागी अनुमति दिन्छ।
तपाईं आफ्नो १ year बर्षको बच्चा वा नातिनातिनाले यो गरिरहेको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, जब तपाईं आफ्नो झोलामा बसिरहनुभएको हुन सक्छ, २० मीमा शर्तको अभाव वा १14 मेगाहर्ट्जमा क्रियाकलापको अभावको बारेमा चिन्तित।
के यो आश्चर्यजनक छ कि साधारण व्यक्तिहरू २०१ Ham मा हाम रेडियो "पाउँदैनन्"?
तिनीहरू के गर्छन्, हामी सबै जस्तै काम सकाउनको लागि सजिलो मार्ग अनुसरण गर्नुहोस्।
यो बढ्छ र बढ्छ ...
अब विश्वव्यापी नेटवर्क रेडियो आंदोलनको वृद्धि आश्चर्यजनक छ, तर एक तहमा आश्चर्यजनक छैन।
यो अन्ततः नेटवर्क रेडियोको साथ हो, विश्वव्यापी सम्पर्कहरू बनाउनको लागि पर्याप्त पीडाविहीन, आयनोस्फीयरको अवस्था जस्तोसुकै भए पनि।
सबै भन्दा पछि यदि तपाईं ईन्टरनेटको प्रसारको रूपमा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले के-इन्डेक्स वा सनस्पट चक्रको राज्य जस्तो चीजहरूको चिन्ता लिनु पर्दैन। (रमाईलो भए पनि त्यो आफ्नै अधिकारमा छ!)
र म "परम्परागत" ह्याम रेडियो बाट निषेध गर्दैछु; म अझै यसलाई नियमित प्रयोग गर्दछु।
म के भन्दै छु के तपाईं लोकलाई "सीधा सडक" को यात्रा गर्न दोष दिन सक्नुहुन्न, कम प्रतिरोधको बाटो, यदि उनीहरू के गर्न चाहन्छ भने समान विचारधाराका रेडियो उत्साहीहरूसँग सञ्चार गर्नुहोस्।
यो धेरै सजिलो छ!
मैले भर्खरै एउटा क्लबमा नेटवर्क रेडियोमा भाषण दिए पछि एक जना भलादमीले यस्तो टिप्पणी गरे, "ठिक छ, यो सबै महान् छ, तर समस्या यो हो कि यो सजिलो छ!"
यथार्थ हो - तर के यो पर्याप्त छैन कारण यसलाई खारेज गर्न सक्छ?
कहिलेकाँही कुनै शौकमा हामी थोरै सजिलो भएको चाहँदैनौं?
के तपाईको डच बाइकमा mile माईलको बाइक राइड छैन बुधवारलाई तपाईको साथीलाई हेर्नको लागि जुन k० किमि स्प्रिन्टबाट तपाईको स्थानीय क्लबको साथ प्रत्येक रेसि bike बाइकमा गर्नुहुन्छ जुन एक राम्रो परिवर्तन हो?
कहिलेकाँही, म नेटवर्क रेडियोमा भिक्के स्टेशनहरूसँग कुराकानी गर्न मनपर्दछ, m० मिनेटमा केहि क्षणको लागि उनीहरूलाई काम गर्न रातभरि बस्नु भन्दा।
हो त्यहाँ एक रोमाञ्चक कार्य गरिरहेको छ जुन नेटवर्क रेडियोसँग हुन सक्दैन, तर त्यहाँ सन्तुष्टि पनि छ जुन अस्ट्रेलियामा रेडियो मित्र बनाएर आउँछ जससँग म नियमित कुराकानी गर्न सक्छु - र तपाई त्यो that० मिटरमा पाउनुहुन्न।
यो केवल "पाठ्यक्रमहरूको लागि घोडा" हो।
'दुबै र', होइन 'कि त वा' ...
कसैले पनि सुझाव दिइरहेको छैन कि नेटवर्क रेडियोले परम्परागत ह्याम रेडियोलाई प्रतिस्थापन गर्दछ - स्पष्ट रूपमा यो गर्न सक्दैन।
तर तपाइँलाई थाहा छ, मलाई थाहा छैन कसैले पनि वास्तवमा यो सुझाव दिइरहेको छ।
हो, यो नयाँ छ (-), यो फरक छ, हो यो सुविधाजनक छ, र गम द्वारा, यो रमाईलो छ!
र, जबसम्म म गल्ती हुँदिन, व्यक्तिहरू रमाईलो गर्नको लागि एक शौक लिन्छन्, सबै भन्दा माथि।
र मैले त्यसमा केहि गलत देखिन!
क्रिस रोलिन्सन G7DDN
30 जुलाई जुलाई 2018
फोटो स्रोत: विकिमेडिया कमन्स
प्रकाशित 28 सक्छ, 2018 28 सक्छ, 2018
एक नि: शुल्क ट्रान्सीवर जीत
एक निःशुल्क मोबाइल नेटवर्क रेडियो कसरी जित्ने जान्नुहोस्! यो सजिलो हुन सक्दैन! यो कुनै ब्रान्डमा कुनै पनि सेक्यु 3G जी-डब्लू २ का लागि स्वीपस्टेक हो - सजिलो मोबाइल प्रयोगको लागि सब भन्दा ठूलो प्रदर्शनको साथ मोबाइल नेटवर्क रेडियो! तपाई केको लागि प्रतिक्षा गर्दै हुनुहुन्छ?
यो नि: शुल्क नेटवर्क ट्रान्सीभर जीत्नको लागि तपाईको ठूलो मौका हो - कुनै पनि सेक्सी-जी - डब्लू २
तपाईले केहि पनि किन्नु पर्दैन। तपाईले गर्नु पर्ने कुरा भनेको हाम्रो न्यूजलेटरमा दर्ता गर्नु हो र तपाईले ep०/०30/२०१ on मा स्वीपस्ट्याकमा नि: शुल्क प्रविष्टि पाउनुहुनेछ।
हामी विजेतालाई इ-मेल मार्फत सम्पर्क राख्छौं त्यसैले यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले हाम्रो ईमेल ठेगाना तपाईंको सम्पर्कहरूमा थप्नुभयो ताकि यो स्पाम फोल्डरमा समाप्त हुँदैन। हाम्रो इ-मेल ठेगाना info@network-radios.com हो
तर तपाइँ स्वीपस्टेकमा थप नि: शुल्क प्रविष्टिहरू कमाएर, जित्ने अवसरहरू बढाउन सक्नुहुन्छ! तपाइँ कसरी थप प्रविष्टिहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस्:
एकचोटि तपाईंले दर्ता गर्नुभयो, तपाईं आफ्नो अद्वितीय कोड पाउनुहुनेछ र तपाईंले आफ्नो साथीहरूसँग मात्र साझा गर्नु पर्छ। हेर्नुहोस् कसरी तपाइँ तपाइँको संभावना बढाउन सक्नुहुन्छ:
प्रत्येक निर्दिष्ट साइनअप +१० प्रविष्टिहरू
फेसबुक +१० प्रविष्टिहरूमा साझेदारी गर्नुहोस्
ट्विटर +10 प्रविष्टिहरूमा साझा गर्नुहोस्
Google+ मा १०१ प्रविष्टिहरू साझेदारी गर्नुहोस्
WhatsApp +10 प्रविष्टिहरूमा साझेदारी गर्नुहोस्
Pinterest +10 प्रविष्टिहरूमा साझेदारी गर्नुहोस्
केवल तल दर्ता गर्नुहोस्। एकचोटि तपाईंले यो गर्नुभयो, तपाईंले कति प्रविष्टिहरू जम्मा गर्नुभयो भनेर जाँच गर्न सक्नुहुन्छ! भाग्यले साथ दिओस्!
हाम्रो पनि पढ्नुहोस् गोपनीयता नीति र कुकी नीति
प्रकाशित4सक्छ, 20184सक्छ, 2018
सबै रेडियोहरूमा १०% छुट
हाम्रो हामराडियो न्यूजलेटर सदस्यता लिनुहोस् र तपाईंको अर्को खरीदमा १०% छुट दिनुहोस्!
पछिल्लो एमेच्योर रेडियो समाचारको साथ मिति पाउनुहोस्! नेटवर्क रेडियो र नयाँ डिजिटल मोडहरू, जस्तै डीएमआर, डी-स्टार र अरूको बारेमा रोमाञ्चक समाचार नभुल्नुहोस्। हामी तपाईंको लागि पर्खिरहेका छौं! 🙂
प्रकाशित अप्रिल 29, 2018
सबै PTT10U रेडियोहरूमा १०% छुट
२-वे रेडियो संचार कुनै दायरा सीमाहरू बिना। त्यो PTT2U हो।
कोड प्रयोग गर्नुहोस् छुट १० चेकआउट मा एक छिटो छूट प्राप्त गर्न को लागी कुनै रेडियोमा समावेश सहित प्रेषण सफ्टवेयर। पदोन्नति मे st१ मा समाप्त हुन्छ।
छुट सदस्यतामा लागू हुँदैन।
प्रकाशित मार्च 7, 2018
PTT4U के हो?
के हुन्छ यदि तपाईं एक गर्न सक्नुहुन्छ विश्वव्यापी कभरेजको साथ ह्यान्डहेल्ड र मोबाइल रेडियोको नेटवर्क? महँगो रिपीटरहरू र इजाजतपत्रहरू बिर्सनुहोस्। सबै कुरा सेलुलर 3G जी / G जी नेटवर्क मार्फत काम गर्दछ।
या त तपाई १-देखि -१ वा १-धेरै-धेरै रेडियो संचार चाहानुहुन्छ, यो तपाइँको लागि हो।
कुनै दायरा रेजिष्ट्रेसनहरू छैनन्। यदि तपाईंसँग सेलफोन कभरेज छ भने, तपाईं जडित हुनुहुन्छ! यसको मतलव यो छ कि प्रत्येक रेडियो बिभिन्न देशहरूमा हुन सक्छ, र तपाइँ अझै पनि तपाइँका सहकर्मीहरूसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ।
PTT4U रेडियोले कुन दूरी कभर गर्दछ?
त्यहाँ कुनै सीमा छैन। जहाँसम्म तपाईंसँग जीएसएम / 3G जी / G जी वा वाइफाइ (एन्ड्रोइड मोडेल) स signal्केत छ तपाईं पुग्नुहुनेछ। यसको मतलव तपाई केवल सेलफोन क्यारियर सेवा, वा वाइफाइ हटस्पटमा निर्भर हुनुहुन्छ।
यो किन परम्परागत वाकी कुराकानीसँग तुलना गर्न सकिन्छ?
पारंपरिक दुई तर्फी रेडियो सँधै दूरी र हस्तक्षेप द्वारा सीमित हुनेछ। हामी सेलफोन क्यारियरहरूमा निर्भर गर्दछ कि एक डिजिटल जडानको साथ काम गर्दा, तपाईं सँधै ठूलो र स्पष्ट हस्तक्षेप-रहित संचार अनुभव गर्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले महँगो रेडियो इन्फ्रा स्ट्रक्चरमा लगानी गर्नु आवश्यक पर्दैन, जस्तै रिपीटर, टावरहरू, एन्टेना वा लीजिंग साइटहरू।
कसले PTT4U बाट लाभ लिन सक्दछ?
ट्याक्सी र सामान्य यातायात कम्पनीहरू, कानून प्रवर्तन, निजी सुरक्षा गार्डहरू, निर्माण साइटहरू, रसद, बक्स चालकहरू, कृषि उद्योग, र अरू कसैलाई दायरा प्रतिबन्ध बिना २-वे पेशेवर रेडियो संचारको आवश्यकता छ।
मैले विस्तृत क्षेत्र र बहु ​​स्थानहरूमा कभर गर्नु आवश्यक छ। के मलाई रिपीटर र एन्टेनाहरूको सेट चाहिन्छ?
होइन। हाम्रो सेवाले GSM / 3G / 4G वाहकहरूको नेटवर्क प्रयोग गर्दछ। तपाईंले मोबाइल वा ह्यान्ड-होल्ड रेडियोको अलावा कुनै पनि नेटवर्क इन्फ्रा-संरचनामा लगानी गर्न आवश्यक पर्दैन।
के यो कुनै देश मा काम गर्दछ?
जहाँसम्म तपाईंसँग इन्टरनेट पहुँच छ (/ जी / G जी वा वाइफाइ मार्फत) तब तपाईं हाम्रो प्रणाली प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, स्थानलाई ध्यान दिएर।
के प्रयोगकर्ताहरू तिनीहरू बीच कुरा गर्न सक्छन्, यदि तिनीहरू फरक देशहरूमा छन्?
हो कुनै पनि प्रयोगकर्ताले कुनै पनि अन्य प्रयोगकर्तासँग कुरा गर्न सक्दछ, स्थानलाई ध्यान दिएर।
के म मेरो टेलिफोनको रूपमा मेरो PTT4U रेडियो प्रयोग गर्न सक्छु?
हाम्रो सबै एन्ड्रोइड आधारित रेडियोहरूले फोन कलहरू र एसएमएस / पाठहरू बनाउन र प्राप्त गर्न सक्दछन्। गैर- Android आधारित मोडेल फोनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन।
के म कुनै सिम कार्ड प्रयोग गर्न सक्छु?
हो, तपाईं कुनै GSM सिम कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो सबै रेडियोहरू सिम अनलक छन् र कुनै पनि GSM / 3G / 4G / LTE नेटवर्कसँग उपयुक्त छ।
के तपाइँ सिम कार्डको साथ PTT4U रेडियो आपूर्ति गर्नुहुन्छ?
होइन। तपाईंले आफ्नो सिम कार्ड घुसाउनु पर्छ।
के प्रत्येक रेडियो संग आउँछ?
प्रत्येक रेडियो प्याकेजले रेडियो, एक चार्जर, ब्याट्री, एंटेना, बेल्ट क्लिप र USB केबल समावेश गर्दछ। को मोबाइल रेडियो अझै एक माउन्टिंग कोष्ठक, माइक्रोफोन र बाह्य GPS एन्टेना ल्याउँछ।
के PTT4U android रेडियोलाई वाइफाइ सख्त प्रयोगको लागि सिम कार्ड चाहिन्छ?
होइन। यदि तपाईं केवल एक वाइफाइ संकेत प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने सिम कार्ड आवश्यक पर्दैन।
के म यो सेवाको साथ मेरो आफ्नै एन्ड्रोइड स्मार्टफोन प्रयोग गर्न सक्छु?
हो तपाईंले भर्खर हाम्रो स्थापना गर्न आवश्यक छ PTT4U अनुप्रयोग तपाइँको स्मार्टफोन मा।
के म सीडीएमए क्यारियरको साथ PTT4U रेडियोहरू प्रयोग गर्न सक्छ, अमेरिकामा भेरिजन जस्तै?
होइन। हाम्रा सबै रेडियोहरूलाई GSM- आधारित क्यारियर आवश्यक छ। हाम्रो G जी / एलटीई रेडियो भेरीजनसँग प्रयोग गर्न सकिदैन, किनकि तिनीहरूलाई तिनीहरूको नेटवर्कमा प्रत्येक उपकरणको पूर्व-अनुमोदन चाहिन्छ।
के म PTT4U रेडियोको साथ AT&T वा T-Mobile, अमेरिकामा प्रयोग गर्न सक्छु?
अमेरिकामा, हाम्रा रेडियोहरू एटी टीटी र टी-मोबाइलसँग ठीक काम गर्दछन्। युरोपमा, अष्ट्रेलिया र अफ्रिकाले पनि कुनै समस्या बिना काम गर्ने छ।
के म PTT4U रेडियो प्रयोग गर्न सक्दछ जब म ग्रिड अफ अफ ग्रिड हुँदो उदाहरणको लागि?
हाम्रो रेडियो प्रयोग गर्न तपाईलाई इन्टरनेट जडान चाहिन्छ। तपाईं एक उपग्रह हटस्पट को रूप मा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यसले तपाईंलाई वैश्विक कभरेज दिन्छ, किनारै किनारमा समेत।
यदि मसँग इन्टरनेट छैन भने के हुन्छ?
यदि तपाईं 3G जी वा वाइफाइ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न भने दुःखको कुरा यो हाम्रो नेटवर्कमा जडान गर्न सक्षम हुनेछैन। जे होस्, तपाई अझै पनी सामान्य फोनको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाई पर्याप्त जीएसएम २ जी संकेत पाउनुहुन्छ।
रेडियोमा SOS बटनको कार्य के हो?
SOS बटनले SOS बटन थिच्ने प्रयोगकर्ताको स्थान देखाउँदै सबै प्रयोगकर्तालाई अलार्म पठाउनेछ।
PTT4U रेडियोलाई एक महिनामा कति डाटा चाहिन्छ?
नियमित प्रयोगको लागि, MB०० एमबी डाटा योजना पर्याप्त हुनेछ। चरम अवस्थामा, जहाँ संचार लामो अवधिको लागि हुन्छ, १ जीबी डाटा योजना आवश्यक हुन सक्दछ
के तपाई एक प्रेषण प्रणाली प्रस्ताव गर्नुहुन्छ?
हो, तपाईं हाम्रो स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ प्रेषण प्रणाली कुनै पनि विन्डोज पीसीमा र कुनै पनि प्रयोगकर्तालाई सम्पर्क गर्नुहोस्, तिनीहरूको स्थिति नक्शामा हेर्नुहोस्, गति, व्यक्तिगत सन्देशहरू पठाउनुहोस्, निजी बनाउनुहोस् र समूह कल गर्नुहोस्।
के म प्रयोगकर्ताहरूको GPS स्थान जाँच गर्न सक्छु?
हो, तपाईं सबै प्रयोगकर्ताहरूको वास्तविक समय स्थान जाँच गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूको ट्र्याकिंग पनि जाँच गर्न सक्नुहुनेछ।
के तपाइँ प्रत्येक प्रयोगकर्ताको लागि कुराकानी अधिकार, र प्रोफाइल अनुमतिहरू परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ?
हो, ती सबै विवरणहरू सेट गर्न सकिन्छ।
के PTT4U रेडियोले निजी बनाउन र अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई समूह कल गर्न सक्दछ?
हो, तपाईं दुबै प्रकारको कलहरू गर्न सक्नुहुन्छ।
के PTT4U रेडियोले अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई निजी सन्देश पठाउन सक्छ?
हो, तपाईं कुनै पनि प्रयोगकर्तालाई निजी सन्देशहरू पठाउन सक्नुहुनेछ।
के मैले PTT4U प्रयोग गर्न कुनै सेवाको सदस्यता लिनु पर्छ?
तपाईंको सेलफोन क्यारियरको साथ डाटा योजनाको अलावा, तपाईंले हाम्रो सदस्यता लिन आवश्यक छ PTT4U वार्षिक सदस्यता.
म PTT4U सदस्यता को लागी कति तिर्ने छु?
हाम्रो वार्षिक सदस्यता मूल्य रेडियो प्रति जाँच गर्न सकिन्छ यहाँ.
किन एक अर्कासँग कुरा गर्न मात्र फोन प्रयोग गर्नुहुन्न?
हाम्रो अत्याधुनिक नेटवर्क लगभग तत्काल छ, एक रेडियोमा पीटीटी थिच्ने बिन्दुमा १ सेकेन्ड भन्दा कममा तपाईको आवाजमा अन्य वा एक व्यक्ति बाहिर आउँदछ, साथै तपाई एकै समयमा १००००० सम्म कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। क्षेत्र कामदार वा गस्ती कर्मचारीलाई संचारको लागि आदर्श।
के हुन्छ यदि सर्वर अफलाइन छ?
त्यो धेरै असम्भव छ। हामीसँग २१ ब्याक-अप सर्भरहरू छन्, रणनीतिक रूपमा स्थित छन्, उत्तर-मध्य अमेरिका, ब्राजील, इ England्ल्यान्ड, जर्मनी, ह Hongक Kong, अष्ट्रेलिया, सिंगापुर, र अन्य स्थानहरूमा अत्याधुनिक आईडीसी (इन्टरनेट डाटा केन्द्रहरू) द्वारा होस्ट गरिएको। सेवा गिरावटको मामलामा, तपाईं हाम्रो उच्च योग्य आईटी टीम विशेषज्ञता र पीटीटी ओभर सेलुलर (पीओसी) उद्योगमा एक दशकको अनुभवमा भर पर्न सक्नुहुन्छ।
म कसरी रेडियोहरू तिर्न सक्छु?
तपाईं Paypal वा कुनै क्रेडिट कार्डको साथ भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ।
म कसरी सदस्यता तिर्न सक्छु?
के म रेडियो र सदस्यता सँगै भुक्तान गर्न सक्छु?
हो, Paypal प्रयोग गर्दै। हामी तपाइँलाई दोहोरिने बिल प्रदान गर्नेछौं, जहाँ पहिलो शुल्क रेडियोको लागत हो र पहिलो वर्ष सदस्यता शुल्क। तपाईले यसलाई प्रत्येक उत्पाद विवरणमा "साइन अप शुल्क" को रूपमा विस्तृत देख्नुहुनेछ। (रेडियो समावेश छ)
के तपाईं अन्य भुक्तानी विधिहरू प्रस्ताव गर्नुहुन्छ?
के म तपाइँको बिक्रेता बन्न सक्छु?
हो, हामी विश्वव्यापी पुनर्विक्रेताहरूको खोजी गरिरहेका छौं। कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस। तपाईं हाम्रो पुनर्विक्रेताहरूको सूची जाँच गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ.
मलाई ठूलो मात्रामा रेडियो चाहिन्छ। म किन्नु भन्दा पहिले प्रयास गर्न सक्छु?
अहिले होइन। तर तपाईं हाम्रो एक किन्न सक्नुहुन्छ सुरूवात प्याकेजहरू एक छूट मूल्य मा, तपाइँ रेडियो / सदस्यता को एक ठूलो मात्रा मा लगानी गर्नु अघि।
के म निःशुल्क परीक्षण पाउन सक्छु?
हामी अहिले त्यस्तो कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दैनौं। हामी विश्वस्त छौं कि तपाईले हाम्रो प्रणालीलाई जे भए पनि प्रेम गर्नुहुनेछ।
मलाई १० सदस्यता वा अधिक आवश्यक छ। के म छुट पाउन सक्छु?
हो, हाम्रो छुट हेर्नुहोस् यहाँ.
यदि म आज आदेश दिन्छु, के म आज बिलिन्छ? र सदस्यता कहिले सुरू हुन्छ?
तपाइँले तपाइँको अर्डर पूरा गरेको क्षणमा तपाइँलाई बिलिनेछ। १ वर्ष सदस्यता मात्र गणना सुरु हुनेछ जब तपाईं रेडियो र प्राप्त हामीलाई सोध्नुहोस् सदस्यता सक्रिय गर्न। यो जस्तो, यदि तपाईं अर्को आवर्ती भुक्तानी असफल भएमा, तपाईंसँग PTT सेवा नगुमाईकन सदस्यता पुनः-सक्रिय गर्न केहि समय बाँकी छ।
के म मासिक सदस्यता लिन सक्छु?
अहँ, हामी केवल वार्षिक सदस्यता प्रस्ताव गर्दछौं।
के तपाइँ एपीआई पहुँच प्रस्ताव गर्नुहुन्छ ताकि म प्रयोगकर्ता स्थानहरू जाँच गर्न मेरो आफ्नै सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सक्छु?
हो, तपाईंसँग एपीआईमा पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको आफ्नै भू समाधान समाधान प्रयोग गर्न।
के तपाइँ पूर्ण-डुप्लेक्स संचार प्रस्ताव गर्नुहुन्छ?
हाम्रो सबै एन्ड्रोइड रेडियोले पूर्ण डुप्लेक्समा नियमित फोन कलहरू गर्न अनुमति दिन्छ। PTT4U को साथ रेडियो जस्तै संचार प्रयोग गर्दा, सबै संचार सरल हुनेछ।
के तपाईंको रेडियोसँग डुअल सिम छ?
हाम्रा धेरै जसो रेडियोहरू डुअल सिम स्लट प्रदान गर्छन्। प्रत्येक रेडियोको चश्मा जाँच गर्नुहोस्।
के तपाइँ सञ्चारहरू ईन्क्रिप्ट गर्नुहुन्छ?
हो, सबै संचार एक प्रोप्राइटरी प्रोटोकल द्वारा ईन्क्रिप्टेड छन् र तपाईंको संगठनको नेटवर्क व्यवस्थापकले मात्र ऐतिहासिक डाटामा पहुँच राख्छ।
मेरो ठूलो संगठन छ। के म प्लेटफर्म आफैं व्यवस्थापन गर्न सक्छु?
हो, तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्ता आवश्यकता अनुसार सबै प्रयोगकर्ताहरू, समूहहरू, कुराकानी अधिकारहरू, आदि प्रबन्ध गर्न सक्नुहुनेछ।
के यो मेरो लागि हो?
तलका कुनै पनि उद्योगले हाम्रो समाधान प्रयोग गर्न सक्दछ:
कूरियर, ट्याक्सी, लिमो सेवा, टु ट्रक, रेलवे, एयरपोर्ट, बन्दरगाह, लाइट रेल, एमआरटी, रसद
निर्माण साइट, सिमेन्ट वितरण, इलेक्ट्रिकल, उत्खनन, नलसाजी, छत
गश्ती गार्ड सेवा, होटल, कन्डो, कार्यालयहरू, कारखाना, खेल घटनाहरू, शिक्षा, फायर सेवा
रेस्टुरेन्ट, होटल, रिसोर्ट, शपिंग मॉल, सुपरमार्केट
पुलिस, शेरिफको विभाग, सार्वजनिक निर्माण, पानी विभागहरु
धेरै निजी ग्राहकहरु हाम्रो सेवा परिवार र साथीहरु संग सम्पर्कमा रहनको लागि प्रयोग गर्छन्
यो साँच्चिकै उत्साहजनक छ! के यो वास्तविक हो?
हो, यो छ। र हामीले सहमत गर्नुपर्दछ: यो अचम्मको कुरा हो! तपाइँको पाउनुहोस् सुरु प्याकेज आज एक छुट संग!
प्रकाशित फेब्रुअरी 28, 2018 फेब्रुअरी 28, 2018
Inrico TM-7 N5MXI द्वारा SD कार्ड कसरी स्थापना गर्ने
१. रेडियोको तल चार बाहेक सबै बाह्य स्क्रूहरू हटाउनुहोस्।
अन्तिम चार तल्लो स्क्रूहरू हटाउनुहोस्। यी नि: शुल्क तलको पीसी बोर्ड SD कार्ड स्लट माउन्ट गरिएको छ। सिम स्क्रू नहटाउनुहोस्।
२. रेडियो केस खोल्नुहोस् तल देखिने पीसी बोर्ड र एसडी स्लट (रातो एर्रो) देखाउँदै।
Bottom. तल पीसीबी ध्यानपूर्वक हटाउनुहोस् ताकि संलग्न तारहरू र रिबन केबललाई नोक्सानी नपुगोस् र कार्ड स्लट अप गरेर समतल सतहमा राख्नुहोस्।
SD कार्ड स्लट कभर hinged छ। रातो एरको दिशामा कभर स्लाइड गर्नुहोस् अनलक गर्नुहोस् र खोल्नुहोस्।
Below. तलको चित्रले SD कार्ड स्लट खोलिएको देखाउँदछ।
तलको सम्पर्कको साथ स्लटमा एसडी कार्ड राख्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि एसडी कार्डमा साइड कार्ड निशान कार्ड स्लटको निशानको साथ मेल खान्छ।
Sure. एसडी कार्ड सही स्थितिमा रहेको सुनिश्चित गर्दै कभर बन्द गर्नुहोस्।
रातो एरको दिशामा स्थानमा लक गर्न SD कार्ड स्लट कभर स्लाइड गर्नुहोस्।
Case. चार स्क्रूको तल्लो पीसी बोर्ड समातेर त्यसपछि अन्य सबै बाँकी स्क्रूको साथ पुन: भेला हुने केस।
Inrico TM-7 को बारे मा अधिक पढ्नुहोस्
प्रकाशित जनवरी 11, 2018
RT4 - पेशेवरहरूको जस्तै कुरा गर्नुहोस्
उच्च गुणवत्ता संग स्पिकर माइक्रोफोन, तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ रेडियो टोन RT4 एक वास्तविक समर्थक जस्तै। माइक्रोफोन ear. 3.5 एमएम सकेटको साथ आउँदछ इयरपिसमा जडान गर्न।
योरेडियो टोन RT4 एन्ड्रोइड POC रेडियो मा अत्याधुनिक छ। RT4 एक धेरै शक्तिशाली मोटोरोला शैली को रेडियो हो, एक स्थायी 4600mAh ब्याट्री संग
यस नेटवर्क रेडियो पूर्ण रूपमा उपयुक्त छ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो नेटवर्क (IRN)
प्रकाशित जनवरी 6, 2018
गर्मीमा F22 र जाडोमा RT4
यदि तपाईंसँग मान्य hamradio इजाजतपत्र छ भने, तपाईं विश्वभरि प्रत्यक्ष पुनरावर्तकहरूमा प्रसारण गर्न सक्नुहुनेछ। तपाई केको लागि प्रतिक्षा गर्दै हुनुहुन्छ? विश्वको कुनै पनि हाम समुदायसँग सम्पर्कमा रहनुहोस्! जहाँसम्म तपाईसँग इन्टरनेट जडान छ, कि त वाईफाई, 3G जी वा G जी द्वारा, नेटवर्क रेडियो प्रयोग गर्नु एमेच्योर रेडियोको ग्लोबल नेटवर्कमा पहुँच गर्न कहिल्यै सजिलो थिएन। IRN - अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो नेटवर्क कि डीएमआर, Echolink, AllStar र एनालग रिपीटरहरू सबै एक साथ जोड्दछ। यो ग्लोबल नेटवर्क एक अविश्वसनीय गतिमा बढिरहेको छ।
तपाईं क्रिस्टल र चर्को आवाज, आश्चर्यजनक देखिन्छ, बैटरी कि दिन को लागी अनुभव हुनेछ। तपाई, उदाहरण को लागी, क्रस-कन्ट्री द्वारा, स signal्केत नछोडी र चिन्ता नगरीकन कुन फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्नुपर्दछ।
चित्र तल: रेडियो टोन RT4 वर्षाको दिनमा।